Vondrona LinkedIn ho an'ny fahombiazan'ny varotra | Martech Zone
Vondrona LinkedIn ho an'ny fahombiazan'ny varotra
Asabotsy 22 Febroary 2014 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
LinkedIn dia loharanom-pahalalana matanjaka ho an'ny mpandraharaha ara-barotra sy ny departemantan'ny varotra mba hahitana sy hifandraisany amin'ny vinan'ny mpanjifany. Sehatra lehibe koa izy io mba hampidirina ao anaty paikadin'ny votoatinao. Efa hatry ny ela ny torohevitray dia ny mba hisian'ny matihanina amin'ny varotra sy ny marketing izay misy ny mpanatrika… izay matetika no ahitàna ny mpijery Vondrona LinkedIn.
Ny vondrona LinkedIn dia manome toerana ho an'ireo matihanina amin'ny indostria iray ihany na manana fahalianana mitovy hizara atiny, mahita valiny, mandefa ary mijery asa, manao fifandraisana amin'ny orinasa, ary mametraka ny tenany ho manam-pahaizana momba ny indostria. Azonao atao ny mahita vondrona hanatevin-daharana anao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny endri-pikarohana eo an-tampon'ny pejy fandraisana na mijery ny sosokevitry ny vondrona tianao. Azonao atao ihany koa ny mamorona vondrona vaovao mifantoka amin'ny lohahevitra na indostria manokana.
Ity infographic ity dia manoritsoritra ny fomba ahafahan'ny Vondrona LinkedIn hivadika ho fitaovam-piadianao miafina ho an'ny fahombiazan'ny varotra!
Tags: b2braharaham-barotraLinkedInvondrona linkedin
Faminaniana momba ny fironana amin'ny Internet
Mifandraisa: ampitomboina ny ROI an'ny tamba-jotra
Rohy Worx Seo
24 Mey 2014 tamin'ny 5:11 hariva
Lahatsoratra tsara Doug, Nanangona [infographic] mahafinaritra ianao. Ny faritra iray izay tsy hitako loatra dia ny faritra. Aiza marina no misy an'io?
Mar 18, 2014 amin'ny 6: 37 AM
Great Blog ,,, mifandray-in dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fananganana fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny fifanakalozan-kevitra ataon'ny vondrona amin'ny lafiny samihafa.
Mar 18, 2014 amin'ny 6: 45 AM
Manaiky anao..mba mitarika dia zava-dehibe ho an'ny mpitantana fampandrosoana ny asa aman-draharaha ho an'ny fampandrosoana ny fikambanana ary mifandray-in dia hanampy azy ireo betsaka, afaka mahazo matihanina amin'ny asa aman-draharaha samihafa izy ireo hifandray amin'izy ireo ary hampiroborobo ny vokatra orinasa.